Laura Himmer Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Laura Himer
Talaado, Agoosto 20, 2019 Talaado, Agoosto 20, 2019 Laura Himer
"Noocyada Ecommerce waxay wajahayaan 80% Heerka Guul darrada" Ganacsiga la taaban karo ee E-commerce In kasta oo tirakoobyadan murugada leh, Levi Feigenson uu si guul leh u soo saaray $ 27,800 oo dakhli ah intii lagu jiray bishii ugu horreysay ee ganacsiga e-commerce. Feigenson, oo ay weheliso xaaskiisa, waxay soo saartay nooc alaab-dhismeedka saaxiibtinimada u leh oo loo yaqaan 'Mushie' bishii Luulyo ee 2018. Tan iyo markaas, dib ugama laabaneyso milkiilayaasha iyo sidoo kale astaanta. Maanta, Mushie wuxuu keenaa $ 450,000 iibin ah. Da'dan lagu tartamayo e-commerce, halkaas oo 50% iibka
Warshadaha ganacsiga elektaroonigga ah ayaa la filayaa inay si isdaba joog ah u koraan sanadaha soo socda. Sababtoo ah horumarka xagga teknolojiyadda iyo kala duwanaanta doorbidyada wax iibsashada macaamiisha, way adkaan doontaa in la haysto qalcadaha. Tafaariiqleyda si wanaagsan ugu qalabaysan isbeddellada ugu dambeeyay iyo teknolojiyadda ayaa ka guuleysan doona marka la barbar dhigo dukaamada kale. Sida ku xusan warbixinta ka socota Statista, dakhliga tafaariiqda ganacsiga caalamiga ah ee e-commerce wuxuu gaari doonaa ilaa $ 4.88 trillion sanadka 2021. Sidaa darteed, waad qiyaasi kartaa sida ugu dhakhsaha badan suuqa